Kiniiniyada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Jacaylka | Androidsis
Ignacio Sala | | Aaladaha Android, Kiniiniyada Android
Axadda soo socota waa Maalinta Jacaylka, oo ah maalin ku habboon cusbooneysii qaar ka mid ah aaladihii hore in aan ku haysanno gurigeenna, ha ahaato kiniin, telefishan, taleefan casri ah ama aalado kale, elektaroonig ama ha ahaato, oo dhammaanaya.
Ahaanshaha barta tiknoolajiyada ee la xiriirta nidaamka deegaanka ee Android, ka hadli meyno alaabta guryaha ama walxaha qurxinta, laakiin aaladaha elektaroonigga ah, gaar ahaan qodobkan waxaan uga hadli doonnaa waxa ay yihiin kiniiniyada ugu fiican siinta maalinta Jacaylka.
Waxay kuxirantahay waxa miisaaniyadeena tahay, miisaaniyad ay tahay inaan ku saleyno baahiyaheena, waa inaan ogaano taas Amazon waxay noo ogolaaneysaa inaan maalgalino iibsashada illaa afar lacag bixin bille ah, maalgelin loo heli karo qaddar dhan 75 illaa 1.000 yuro, oo ku xiran xaaladaha Cofidis, sidaa darteed waxaan uga faa'iideysan karnaa maalgalintan si aan u dooranno moodel noo sii socon doona dhowr sano.
1 Si aad u tixgeliso
2 Galaxy Tab S7 iyo S7 +
Kahor xulashada indho la'aanta, waa inaan tixgelinno taxane dhinacyo ah calaamadeyn doonaa mustaqbalka tusaalaha aan dooranay.
Haddii aan u isticmaali doonno kiniinka cunno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan, waxaa ugu wanaagsan in la doorto qaab 10-inji ah. Laakiin haddii ujeedkeenu yahay inaan la tashanno shabakadaha bulshada, fiiri fiidiyowga aan fiicnayn, ka jawaabno emayllada ... oo leh kiniin 8-inch ah waxaan haysannaa wax ka badan intii nagu filan.
Samsung ayaa ficil ahaan ah shirkada kaliya ee cusbooneysiisa aaladaha ay suuqa ka soo saarto, marka haddii aadan rabin inaad ka baxdo wararka weli ku soo food leh noocyada soo socda ee Android, waa inaad tixgelisaa moodooyinka kala duwan ee soo-saaruhu na siiyo.
Haddii aad jeceshahay inaad wax sawirto, oo aad rabto inaad wax badan ka hesho kiniinkaaga, waa inaad siisaa moodooyinkaas waxay isku daraan stylus. Maskaxda ku hay in stylus loogu talagalay inuu la shaqeeyo kaniiniga uusan la mid ahayn stylus fudud oo la shaqeeya shaashadaha taabashada (tanna waxaan ka leeyahay khibradeyda).
In kasta oo ay run tahay in dhammaan badeecadaha aan ka iibsan karno Amazon ay na siinayaan 2 sano damaanadHadday ku saabsan tahay kiniinno asal ahaan ka soo jeeda Aasiya (maahan in la xaqiro laakiin waa run), waxaa layaab nagu noqon doonta haddii ay jabto, maadaama nidaamka dayactirka uu qaadan karo waqti ka dheer intii la filayay.
Sidoo kale, haddii muraayadda ama walxo kale oo ka mid ahi ay jabaan, waxay u badan tahay inay sidaas tahay tan lama hagaajin karo waana nalagu qasbay inaan tuurno. Si looga fogaado dhibaatada noocan ah, waxa ugu fiican ee aan sameyn karno ayaa ah inaan kiniinka si wadajir ah u wada iibsanno daboolna aan labadaas marna kala maarmin. Ama aad gasho caymiska ay Amazon na siiso.
Galaxy Tab S7 iyo S7 +
ka Galaxy Tab S7 y Galaxy Tab S7 + Waa kiniinnadii ugu dambeeyay ee ay shirkadda Kuuriya ka hirgeliso suuqa. Labada noocba waxyar o iyagu ma hayaan wax ay ka maseyraan iPad Pro, Maaddaama ay isku darayso taageerada S-Pen (oo lagu daray sanduuqa) marka lagu daro bixinta taageerada kumbuyuutarka leh trackpad (oo si gooni ah loo iibiyo) oo aan kiniinkeenna ugu rogi karno kombuyuutar isticmaal.
Galaxy Tab S7 wuxuu na siiyaa shaashad ah 11 inji oo leh 120 Hz soodhaha, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah (waxaa sidoo kale jira nooc leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah).
Wuxuu dhexgalaa processor 8-core ah oo aan ku awoodno edit videos oo waxaad ku raaxeysataa cayaaraha ugu awoodda badan dhib la'aan. Batariga wuxuu gaaraa 8.000 Mah. Dhinaca dambe waxaan ka helnaa kamarad weyn oo 13 MP ah oo ay weheliso 5 MP xagal ballaaran iyo sidoo kale flash. Kaamirada hore waa 8MP.
La Galaxy Tab S7 waxaa lagu heli karaa 650 euro on Amazon.
Galaxy Tab S7 wuxuu na siiyaa a Shaashad 12,4-inji ah oo leh 120 Hz cusbooneysiin ah, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah (waxaa sidoo kale jira nooc leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah).
Waxaa maamula a 8 processor muhiim ah iyo baytariga gaadha 8.000 Mah. Dhinaca dambe waxaan ka helnaa kamarad weyn oo 13 MP ah oo ay weheliso 5 MP xagal ballaaran iyo sidoo kale flash. Kaamirada hore waa 8MP.
Qiimaha Galaxy Tab S7 + wuxuu gaarayaa 775 euro on Amazon.
Model kale oo la jaan qaada Samsung S-Pen waa Galaxy Tab S6 Lite, hal nooca dib loo habeeyay ee Galaxy Tab S6 oo leh shaashad 10.4-inji ah, 4 GB oo RAM ah iyo 64/128 GB oo keyd ah. Moodelkan waxaa maamula processor 8-core ah, wuxuu leeyahay 8 MP camera gadaal ah iyo 5 MP camera hore.
Qiimaha Galaxy S6 Lite ee Amazon waa 339 euro.
Waqti yar oo ka badan suuqa marka loo eego nooca Lite, waxaan ka helnaa Galaxy Tab S6, kiniin sidoo kale waa la jaan qaadaya S Pen ka Samsung, waxay na siisaa 6 GB oo keyd ah iyo processor 8-core Snapdragon 855 ah, in kasta oo waliba lagu heli karo nooc leh 8 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo keyd ah.
Qaabkani wuxuu leeyahay a 10,5 inch screen, kamarad gadaal ah 13 MP iyo kamarad hore 8 MP. Batariga wuxuu gaarayaa 7.040 mAh, wuxuu ku dhexjiraa dareeraha faraha ee shaashada hoose iyo kuhadalka AKG.
La Galaxy Tab S6 waxaa laga heli karaa Amazon oo ah 660 euro.
Ikhtiyaar bartamaha udhaxeeya Tab S6 iyo Galaxy Tab S4 waa Galaxy Tab S5e, kiniin leh Shaashadda 10.5-inji, 4/6 GB oo RAM ah, 64/128 GB oo keyd ah iyo processor 8-core ah. Maaha mid ku habboon S Pen, laakiin haddii aan awood ku raadinayno qiimo jaban oo aannaan doonayn qaab soo-gal ah, qaabkani si sax ah ayuu u ansax yahay.
La Galaxy Tab S5e waxaa laga heli karaa Amazon oo ah 385 euro.
Xadka gelitaanka ee kiniiniyada Samsung waxaa laga helaa taxanaha 'Tab A', oo ah nooc aan ka heli karno nooc ka mid ah 10.4 inji iyo 8 inji kale. Labada moodelba waa la cusbooneysiiyey Android 10 waana ikhtiyaar aad u fiican oo lagu daawan karo waxyaabaha adeegga qulqulka, hubi emaylka, shabakadaha bulshada ...
Qiimaha Galaxy Tab A 7 waa 193 euro iyo Tab A 8.0 waa 159 yuuro.
In kastoo adeegyada Google la'aanteed (oo lagu rakibi karo dhibaato la'aan), waxaan helnaa Huawei MediaPad Pro, oo ah kiniin ah 10,8 inches leh IPS panel, qaraarka FullHD, processor Kirin 990, 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo keyd ah.
Batariga wuxuu gaaraa 7.250 Mah kaas oo na siiya ismaamul ilaa 12 saacadood oo fiidyow ka ciyaara maxalliga. Waxaa ku jira Huawei M-Pencil, oo aan ku sawiri karno shaashadda marka lagu daro maareynta hawlgalka qalabka.
La Huawei MediaPad Pro waxaa lagu qiimeeyaa 479 euro on Amazon.
Si ma rabto inaad lacag badan ku bixiso On kiniin ah, MediaPad T5 (oo leh adeegyada Google) waa xulasho aad u fiican. Waxay leedahay shaashad 10.1-inji ah oo ay wehliyaan 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB RAM, in ka badan in ku filan oo lagu raaxeysto socodka fiidiyowga, emaylka, shabakadaha bulshada ...
Qiimaha Huawei MediaPad T5 waa 189 euro on Amazon.
Mid ka mid ah xulashooyinka dhaqaale ee aan ka heli karno suuqa kiniinnada waa Lenovo M10, kiniin leh a 10.3 inch screen, oo ay maamusho processor-ka MediaTek ee Helio P22T, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo xasuusta ah oo la ballaarin karo illaa 256 GB. Ma yahay waxaa laga heli karaa Amazon kaliya 199 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Jacaylka